Badhan:Mudaharaad lid ku ah Magacaabista Golaha Wasiirada Cusub | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > PUNTLAND, WARARKA	> Badhan:Mudaharaad lid ku ah Magacaabista Golaha Wasiirada Cusub
Sunday, November 14, 2010 Laaska News
Wararka laga helayo magaalada Badhan ee Gobolka Sanaag iyo nawaaxigeeda,kana tirsan Maamulka Puntland in maanta halkaa kadhaceen mudaharaad lagaga soo horjeedo qaabka loo dhisay Golaha Wasiirada Cusub.
Dadka mudaharaadayay ayaa waxay ugu baaqeen xubnaha Baarlamaanka iyo siyaasiyiinta Muqdisho ku sugan inay halkaa ka soo baxaan ayna xukuumadii ay kala noqdeen kalsoonidii.
Nabadaoon Faysal Cabdulaahi Faatax(Faysal Dheere) oo warbaahinta waraysi siiyay oo ay ku jirto BBC da ayaa sheegay in nabadoonada deegaankaasi oo gaaraya 43 Nabadoon ay kala noqdeen kalsoonidii ay u hayeen Dawladda ku meelgaarka ah.
Waxaa shalay magaalada muqdisho warsaxaafadeed ku qabtay xubno baarlamaanka ah oo ka soo jeedaa deegaanadaa maanta mudaharaadku ka dhacay,waxayna sheegeen in miisaankii habka dhismaha ee dawladda ku meelgaarka loo dhisi jiray uu Raysal Wasaare Farmaajo uu ka leexday,ayna Goboladoodii ku noqonayaan waxaana xildhibaanada kamid ah Cawad Axmed Casharo iyo Caasha Axmad Cabdalla oo labada xubnood ay aad u taqaano.
Waxaa xusid Mudan Deegaankan laguma soo darin liiskii cusbaa ee Golaha Wasiirada ee uu Dr. Farmaajo magacaabay,wuxuuna deegaankani uu horay u taageeray magacaabistii Raysal Wasaare Farmaajo.
Deegaanada uu mudaharaadku ka dhacay iyo Xubnaha Barlamaanka ayaa ka soo jeeda Beesha Warsangali oo miisaan iyo Deegaanba ku leh Soomaaliya Koonfur iyo Waqooyigaba,waa arrin ubaahan in dawladdu ka fiirsato,waana in Dr. Farmaajo xaliyaa wixii cabasho iyo tabashaha ee soobaxay inta uu san Dawladdiiisa hor geyn Baarlamaanka.
Lamaanihii ingiriiska ah ee la siidaayay oo ay qaabileen Madaxda sare ee Dawladda Soomaalia SSC-Wafdi uu hogaaminayo Garaad Jaamac Garaad Cali oo La kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Sh.Shariif